Tigreega oo sameeyey tillaabooyin dhanka dacaayadda ah oo ay uga yaabiyeen DF Itoobiya | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Tigreega oo sameeyey tillaabooyin dhanka dacaayadda ah oo ay uga yaabiyeen DF...
Tigreega oo sameeyey tillaabooyin dhanka dacaayadda ah oo ay uga yaabiyeen DF Itoobiya
(Addis Ababa) 11 Nof 2020 – Xilli ay DF Itoobiya ay dagaal furan kula jirto Maamul-goboleedka Tigreega ee woqooyiga dalkaasi, waxaa bar bar soconaya xogo been ah oo dagaalka laga faafinayo, kuwaasoo ay inta badan adeegsanayaan Tigreegu.
Waxaa sawirrada baraha bulshada la geliyey ka mid ah hannaanka daafaca cirka ee Ruushku sameeyo ee S-400 oo laga dhigay inay diyaarsadeen ciidamada Tigreegu si ay iskaga daafacaan DF Itoobiya oo cirka ka duqaynaysa bartilmaameedyo ay leeyihiin.
Waxay kale oo sheegteen inay sidoo kale ku hubaysan yihiin holac-tuure uu isla Ruushku sameeyo oo ay dagaalka u adeegsanayaan.
“Ethiopia abid ma yeelanin gantaalaha S-300 ama S-400 series… hal dal oo deris la ihina xitaa ma haysto,” ayuu yiri Justin Bronk, oo ka tirsan Royal United Services Institute (Rusi), oo London kula hadlay BBC News.
Waxay kale oo sheegteen inay soo rideen dayuurad Miig ah oo ay leeyihiin Ciidanka Cirka Itoobiya, balse markii la baaray waxaa soo baxday in sawirkani aanu Itoobiya ahayn oo waxaa Google kasoo baxay laba mid:
Luulyo 2018, Press TV ayaa faafiyey in dayuurad Sucuudigu leeyahay lagu ridey Yaman.
Bishii Maajo 2015, waxaa Twitter lasoo dhigay sawirka dayuurad MiG-25 ah oo la sheegayo in lagu ridey meel u dhow magaalada Libya ee Zintan.
Raqdii dayuuraddii Ethiopian Airlines ee Nairobi u socotey.
Waxaa sawirkan ay ka dhigeen Amxaaro ay sheegeen inay ku laayeen xadka gobollada Axmaarada iyo Tigreega, yeelkeede, waa Ethiopian Airlines 737 Max 8 oo dhacday isla markii ay kacday taasoo bishii Maarso ee sanadkii 2019-kii ay ku dhinteen 150 iyadoo ka duushay Addis Ababa.
Ma jiro Wasiir Itoobiyaan ah oo askarta faray inay maasgare xirtaan
Waxaa baraha bulshada lasoo geliyey Wasiirka Caafimaadka Itoobiya, Lia Tadesse, oo lagu xifaalaynayo inay askarta fartay inay afka xirtaan si ay iskaga jiraan Covid-19, balse waa sawir la macmalay.
Xogahan marin habaabinta ah ayaa la sheegayaa inay aad u saamaysay macnawiyadda ciidamada Itoobiya ee Federaalka ah.
Previous article”Fursad baan u jeednaa” – Kenya oo Safaraad rasmi ah ka dhisatay Muqdisho & qorsheheeda cusub
Next articleWaa kuwee madaxda weli diiddan inay u hambalyeeyaan MW dooran ee Maraykanka?